watchOS 4 inosvika nenhau dzakanaka, kunyorera kwakanyorwa pane Apple Watch | Ndinobva mac
Ndine yangu Apple Watch kubva pazuva rekutanga modhi yekutanga yakaiswa mukutengesa kuSpain. Ndichiri kurangarira husiku hwakatangira kutengeswa, ndichiyeuchidza webhusaiti yeApple kuti ndizive kwandaifanira kudzvanya kuti ndikwanise kutenga nekukurumidza uye kugona kuva neyuniti zuva rimwe chetero kubva panguva imwechete yandaive nayo kuronga neshamwari yangu yekuMadrid kuti auye kuzotsvaga nekuuya nayo kuGran Canaria mundege yandakazove nayo zuva rapfuura payakatengeswa.
Sezvauri kuona, ndanga ndichishandisa ichi chishamiso kubvira pakavambwa uye ndinoona kuti mashandiro ayo ari kuwedzera kupenya. Uchapupu hweizvi nderemangwana watchOS 4 iyo inouya yakatakurwa nenhau pakati pazvo isu tine zvatinoda kukuudza mune ino chinyorwa.
Imwe yenyenyedzi nyeredzi yeApple Watch kubvira wachiOS 1 uye kuti panguva imwechete yakaratidza yavo yekumba chidzitiro yaive huchi huchi kurongedzwa kwemaapplication mumifananidzo yakatenderera. Kana isu tiri pachiratidziro chemumba uye isu tichitenderedza korona yedhijitari, aya ma icon anowedzera saizi yavo kuti vakwanise kuadzvanya. Kuti tizvironge patsva, chatinofanira kuita kumanikidza nguva dzose pane chimwe chazvo kudzamara zvatanga kudedera.
Kana ndikakuudza chokwadi, hazvirevi kuti ndinobvumirana zvakasimba nenzira iyi yekuwana maapplication uye ndezvekuti dzimwe nguva urikudzvanya icon uye iwe ukangoerekana wadzvanya imwe kana iwe unongoona usinga tarise kwekutanga iko iko application kwauri kutsvaga kuri.
MuwatchOS 4 iri kuzopera uye ndeyekuti Cupertino yaita kekutanga sarudzo yechipiri yekugona kuona ese maficha mune nyowani yekuratidzira modhi, mune runyorwa modhi. Nenzira iyi patinodzvanya kamwe «zvakaoma» pachiratidziro chemumba, iyo sisitimu inotipa mukana wekugona kuona mashandisirwo ari mune yenyuchi pani modhi kana mune alfabheti rondedzero modhi.
Icho chaicho chinhu chinoita kuti aripo Apple Watches awedzere kugadzirwa uye ramangwana Apple Watch Series 3 ichasvika neshanduko dzakakomba pasi pehodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 4 inosvika nenhau dzakanaka, kunyorera kwakanyorwa pane Apple Watch
Gerardo Sánchez akadaro
Iwe unofanirwa kutaura muchinyorwa kuti iyo menyu yemamiriro ekushandurwa inogoneswa sei: bvisa iyo skrini kubva kune maapps nekutsikirira korona uye wobva wadzvanya zvakaomarara pane chero nzvimbo yeyiyi skrini kuti uione.
Pindura Gerardo Sánchez
Iyo 21,5-inch iMac iri mumawoko eIfixit Ivo havana processor inotengeswa uye kana iyo RAM!